Monday August 08, 2016 - 15:55:30 in Wararka by
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay oo ay heshay SomaliMeMo ayaa xaqiijinaya in uusan shaqa bilaabin guddi bishii Lasoo dhaafay uu Golaha wasiirradu usaaraan in ay wax ka bedelaan qodobada qaar ee waxa loogu yeero "Xeerka Jinsiga”.
Guddiga la magacaabay oo u muuqday mid ay xukuumaddu isaga yaraynaysay hadal heynta bulshada ee ku aaddan ansixinta xeerka fuxshiga ayaan haba yaraatee shaqa bilaabin wuxuuna ahaa guddi aan dhaafin xafiiska R/wasaaraha.
SomaliMeMo ayaa ogaatay in Dowladda Federaalka ay si rasmi ah ay u qaadatay xeerka Jinsiga ee dhigaya in Raggu ragga u tagi karaan islamarkaana gabdhaha Soomaaliyeed ay gogol dhaaf sameyn karaan arrinkaasi oo khilaafsan shareecada islaamka.
Shacabka Soomaaliyeed ee Muslimka ah ayey adagtahay sida uu uqaato dhaqamada Qowmu Luudka ee wadamada reer galbeedka qaarkood lagasoo minguuriyay.
Waxaa xusid mudan in sirdoonka Dowladda Federaalka ay hanjabaad u jeediyeen dhammaan culimadii warbaahinta ka cambaaraysay xeerka Jinsiga.
Kooxo Culimo ah oo DF-ka la shaqeeya ayaa iyana looga digay in ay dhaleeceeyaan xeerkan ay dowladdu sumcad uga raadsanayso dowladdaha Mareykanka iyo hay’adaha sheegta xuquuqul insaanka.
Max’med Cabdi Xayir Maareeye wasiirka warfaafinta DF-ka oo horay ugu adkeystay in xeerka Jinsigad ee golaha wasiirradu ansixiyay uu yahay mid caadi ah ayaa diiday in uu warbaahinta kala hadlo halkii uu ku dambeeyay guddigii ay u saareen dib u eegista xeerka Jinsiga.
Culimaa’udiinka Soomaaliyeed ayaa sheegay in Madaxda Dowladda Federaalka ay ku dhaceen Riddo Mughallada ah markii ay dalka ciidanka shisheeye kusoo hoggaamiyeen islamarkaana ay dajiyeen dastuur ogolaanaya in Raggu isguursan karo islamarkaana faafinaya zinada oo la dagaallamaya guurka xalaasha ah.
Halkan ka Akhriso Xeerka Jinsiga ee baneynaya Liwaadka PDF.
Saldhigga ciidanka Itoobiya ee degmada Buurdhuubo oo weerar culus kala kulmay Al Shabaab.